Vamwe vatambi vane mukurumbira vanobva kuMorocco | Absolut Kufamba
Vamwe vatambi vane mukurumbira vanobva kuMorocco
Isabel | | Morocco
Mufananidzo | As.com
Moroccan cinema indasitiri hombe mu Africa ine tarenda rakakura rekutaura inonakidza, inofamba uye yakasarudzika nyaya. Vatambi vayo ndevamwe vevakabudirira kwazvo mukondinendi uye vazhinji vanofunga kukwidza kuenda kuEurope kunotsvaga mapurojekiti matsva ekuwedzera mabasa avo nekuzivikanwa pasi rese.
Muchikamu chino tichataura nezve trajectory yevakawanda vakakurumbira kwazvo vatambi veMoroccan, vebudiriro huru uye ramangwana muindasitiri yemamuvhi izvo zvamunenge muchitoziva yekuvaona mumazhinji mafirimu, terevhizheni nemitambo yemitambo. Kana iwe uchifarira nezve cinema uye yayo nyeredzi system, usarasikirwa nazvo!
1 El Hammani Mine
El Hammani Mine
Akazvarwa mu1993 muMadrid asi anobva kumhuri yedzinza reMoroccan. Sezvo anga ari mudiki kwazvo, Mina El Hammani (makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa) aigara achiziva kuti aida kuzvipira kuita nyika yekuita. Kubva kuvabereki vake akadzidza tsika yekuedza kuzadzisa zviroto zvake, saka akatanga kushanda aine makore gumi nematanhatu muresitorendi yekutsanya uye zvakare semuperekedzi kuPalacio de los Deportes kuMadrid kuti abhadhare zvidzidzo zvake pasi rose. yemitambo. bhaisikopo.
Kunyangwe anga ari pachikuva pane akati wandei ne "Mukati mePasi" naPaco Becerra (2017) kana kuita kuverenga kwakafananidzwa kwa 'De mujeres sobre mujeres' kuEllas Crean Festival (2016), zvichibva pane zvinyorwa kubva kune akasiyana playwrights akadai Dakota Suárez, Sara García, Laila Ripoll, Yolanda Dorado naJuana Escabias.
Zvisinei, Mina El Hammani akazozivikanwa kumeso kune veruzhinji kubva paakaonekwa kekutanga muterevhizheni mune akateedzana «Centro Médico». Zvino kwakauya kukanda kwake kwekutanga kweakabudirira Telecinco akateedzana "El Príncipe" (2014) kwaakapa hupenyu kuna Nur mumwaka wechipiri, muchengeti waFatima (Hiba Abouk) uyo Mina aiyemura zvikuru sekureva munyika yekutamba nekuita multicultural icon.
Kubatanidzwa kwake pachiratidziro chidiki kwakauya muna2017 paakawana chinzvimbo chake chekutanga mukutungamira «Servir y Protecte» (2017) saSalima mune rimwe remarongedzero naPepa Aniorte.
Iyo nhepfenyuro umo Mina El Hammani akawana mukurumbira yaive "Elite" (2018) kwaanotamba Nadia, mudzidzi ane mubhadharo anopinda chikoro chepamusoro chepamusoro-soro achiri kumba anogara dzidzo yakasimba yeMuslim yakarovererwa maari nevabereki vake, vanoita bhizinesi rakaderera. Mukati merangano, arc yehunhu hwake ndeimwe yevakapfuma nekuda kwekukonana kunoitwa nenyika dzese.
Mushure mekupfuura "Elite", mutambi wedzinza reMoroccan achapinda mu "El Internado: Las Cumbres" (2021) paAmazon Prime Vhidhiyo uye inosunungurwawo semufananidzo wechiratidzo cheGuerlain. Uyu mutambi wedzinza reMoroccan anotaura chiArabic, Chirungu neSpanish.
Mufananidzo | Europa Press
Adil Koukouh (ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa) akaberekerwa muTetouan mu25. Pamwe chete nemhuri yake akatamira kuMadrid kwaakagara kubvira aine makore 1995 ekuberekwa. Jaya raida kuve modhi asi pachikoro chaJavier Manrique, A Pie de Calle, vakaona kugona kwake pamberi pekamera ndokumugonesa kuti kuita ndicho chinhu chake. Iye akavacherekedza uye akapedzisa kudzidza Dramatic Art, izvo zvakamutungamira kuti ave mutambi wezvekuvimbisa uye chivimbiso chekududzira muSpain.
Vazhinji vatambi vechidiki vanotanga kutora matanho avo ekutanga pachiratidziro chidiki kuti vasvetuke kuenda ku cinema gare gare. Izvo zvakare zvakaitika kuna Adil Koukouh uyo akatora nhanho dzake dzekutanga mukuita mumwaka wekutanga wenyaya dzinoteedzana "B&B: de Boca en boca" (2014), uko vatambi vakaita saBelén Rueda, Macarena García, Fran Perea kana Andrés Velencoso vakapinda.
Akatorawo chikamu muTelecinco akateedzana "El Príncipe" (2014), iyo yakaputsa marekodhi evateereri mumwaka wayo wekutanga. Ikoko akatamba Driss, mukomana weMoroccan uyo akarota ave mutambi wenhabvu. Mune dzino zvakateedzana, akagovana bhiri nenyeredzi dzakadai saRubén Cortada, Alex González, Hiba Abouk, José Coronado, Thaïs Blume kana Elia Galera.
Pane terevhizheni, achangobva kuve chikamu chemitambo yakadai se «Vis a vis» (2015) naAntena 3, «El Cid» (2019) neAmazon Prime Vhidhiyo kana Entrevías (2021) neMediaset Spain.
Adil Koukouh akapindawo mumabhaisikopo, kunyanya semunhu mukuru mufirimu "A muchivande" (2014) inotungamirwa uye yakanyorwa naMikel Rueda weVertigo Mafirimu. Iyi firimu yakatanga kuratidzwa kekutanga kuMalaga Film Festival. Mariri, uyu mutambi mudiki weMoroccan anozviisa mushangu dzaIbrahim, mukomana anogara nyaya yerudo nemumwe mukomana anonzi Rafa. Pasina mubvunzo, ibasa rakaoma kune rookie uyo anofanira kutakura huremu hwekutungamira chinzvimbo mufirimu. Anoperekedzwa mufirimu nevatambi vechimiro cheGermán Alcarazu, Alexander Angulo naAna Wagener.
Kunyangwe pahudiki hwake, aendawo pachikuva kutora chikamu mumutambo "Rashid naGabriel" (2019), naGabi Ochoa semunhu mukuru.
Mufananidzo | Antena3.com
Nasser Saleh (ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa) mutambi wechiSpanish wekuMoroccan chizvarwa uyo kubva pazera diki akashanda mune zvimwe zvinobudirira zvigadzirwa zveSpanish fikisheni. Akatanga basa rake paterevhizheni mune akateedzana "HKM" (2008) naCuatro achipa hupenyu kuMoha uye akazopfuura ne "La pecera de Eva" (2010) naAlexandra Jiménez kutamba Leo. Nekudaro, zvakatozoita kusvikira ave chikamu chevateveri ve "Física o Química" paakazove anozivikanwa kwazvo.
Muna 2008, "Física o Química" yakatanga kuratidzwa musi waAntena 3, chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo zvekuyaruka mumakore achangopfuura munyika medu. Ngano yaive yekucherwa kwevazhinji vechidiki vatambi vakadai saNasser Saleh, uyo mumwaka wechishanu akatamba weRoma wechidiki Moroccan akagamuchirwa nemumwe wevadzidzisi veZurbarán.
Mushure meiyi nhepfenyuro yevechidiki akatanga mamwe mapurojekiti akadai se "Imperium" (2012) kwaakatamba Crasso (muranda mumhuri yeSulpice), "Toledo: kuyambuka kwevakatarwa" (2012) (kwaaive nebasa raAbdul) kana "Muchinda" (2014). Akaonekwawo mu «Tiempos de guerra» (2017), kumwe kugadzirwa kwaAntena 3 kweterevhizheni.
Kunze kwekushanda paterevhizheni, basa rake rakakura nemabasa emamuvhi mumafirimu makuru akadai se "Biutiful" (2010) Inotungamirwa naAlejandro González Iñárritu uye nyeredzi Javier Bardem kana "Hakuzove nerunyararo kune vakaipa" (2011) inotungamirwa naEnrique Urbizu uye kwaakagovana screen naJosé Coronado.
Mufananidzo | Netflix.com
​Gad Elmaleh (ane makore makumi mana nemapfumbamwe) mutambi weMoroccan uye mudhongi akaberekerwa muCasablanca anofarira kubudirira kukuru muFrance. Chipo chekududzira chinomhanya nemutsinga dzake nekuti baba vake vaive mime. Muna 1988 akafamba kubva kuMorocco achienda kuCanada, kwaakagara kwemakore mana. Ikoko akadzidza sainzi yezvematongerwo enyika, akashanda pawairesi, uye akanyora akawanda mamonologi aaiita mumakirabhu muMontreal.
Makore gare gare, mutambi weMoroccan uyu akaenda kuParis kwaakatora kosi yeLe Cours Florent ndokunyora mutambo unonzi 'Décalages' uyo waitaura zvakawanda nezve zvakaitika kwaari muMontreal neParis muna 1996. Makore matatu gare gare, akapa yake yechipiri solo show yakadanwa. 'La Fri Normale'.
Gad Elmaleh akazove mutambi ane mukurumbira asi ari zvakare mutambi ane mukurumbira airidza mumafirimu akati wandei eFrance senge "The Game of Idiots" (2006), "A Luxury Deception" (2006), kana "Midnight muParis" (2011). Akaitawo nhanho dzake dzekutanga semunyori wezvekunyora uye semutungamiriri. Uye zvakare, iye wedzinza revaJudha uye anogona kutaura mitauro yakati wandei inosanganisira chiArabic, chiFrench nechiHebheru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Vamwe vatambi vane mukurumbira vanobva kuMorocco
Kudya kweKisimusi muRussia
Tsika uye dhizaini yePopayán